Waxaad u leeyihiin in ay ka hor Mortgage Refinance | Mortgage Loan iyo Mortgage Refinance
Mortgage Loan iyo Mortgage Refinance
Waxaad u leeyihiin in ay ka hor Mortgage Refinance
ruaythecat November 4, 2015 Amaah Mortgage, Refinance Mortgage, Kale, Refinance Mortgage
Waxyaabaha aad ogaanaysid Waa Ka hor inta refinance mortgage yahay
Bedelaadda asalka ah mortgage si aad u hesho guri cusub mortgage in waxa loo yaqaan maalgelinta. Maalgelin waa in dhigo deyn si aad u hesho xiisaha muddo kala duwan oo ka wanaagsan iyo heerka doorasho. Markii ugu horeysay ee amaah guriga waxaa horey u bixisay, labaad amaah la leydin doonaa cusayb ah mortgage halkii ka dibna tuuraya mortgage asalka iska.
Haddii deynsanaya leeyihiin taariikh credit wanaagsan, Kenny Huang ay noqon kartaa hab ka fiican sidii hore.
Tusaale ahaan, Danahooda u bedeli karaan variable ah amaah heerka danaha go'an iyo sidoo kale ka heli kartaa in aad bixisid dulsaar hoose. Laakiin haddii deynsanaya leeyihiin credit xun ama weli dayn aad u badan si ay u tagaan, maalgelinta mortgage noqon doonaa khatar iyaga u.
In kasta oo xaaladda dhaqaale ee labada dulsaarka sare iyo dhaqaalaha ruxanaya, waxaa laga yaabaa kuwo ku adag in lacag on mortgage guri oo laga yaabo in ay adag tahay intaad filaysay.
Oo waxaa hadda ma waxaad u malayseen in aad ku jirto xaalad this??
Sidaas waxaa laga yaabaa in waqti aad u fiirsan maalgelinta mortgage.
First of dhan ah Huang uu yahay mid khatar ku ah in u maalgelinta been iyagoo Jaahil ah. Haddii aadan si sax ah u ogaadaan oo ku saabsan maalgelinta, waxa aad dhimi kartaa la sii kordhaya dulsaar aad halkii ay hoos!
Sidaa darteed, tusaale ahaan, waa in aad taqaan ugu yaraan aqoonta aasaasiga ah sida barbar heerka hadda mid kasta deyn ama bangiyada ee degaankaaga.
Waa Maxay Qeexid ee u maalgelin?
Maalgelinta waa habka loo maro cusub ah amaahda hantida maguuraanka ah hoos loogu dhigo lacagta bil kasta ka haysta dulsaarka hoose, qaato lacag caddaan ah oo ka mid gurigaaga soo gato waaweyn ama la beddelo shirkad mortgage. Dadka intooda badan refinance mortgage marka ay leeyihiin sinnaanta on guryahooda, taas oo ah farqiga u dhexeeya lacagta wuxuu ku lahaa shirkad mortgage iyo qiimihii guriga.
waa in aad refinance mortgage ?
4 wax u qorsheeyaan refinance mortgage
1. Ogow oo la lug doonaa refinance mortgage
Inkastoo ay jiraan shaqaale badan oo u refinance mortgage sida appraisers hantida maguurtada ah iyo Underwriters mortgage kuwa u iman doonaan inay ka shaqeeyaan sidii door muhiim ah, la xiriir hoose noqon doonaa wax amaahiya ee nooc kasta oo refinance. Waa inaad marka hore la shaqeeya aad wax amaahiya via habka mortgage refinance ah. Dhinaca kale, aad wax amaahiya koox cidda ka qaybqaadanaysa macaamil ah Huang mortgage aad ka shaqeyn doonaan. In kasta oo aadan la kulmi doono oo dhan oo ka mid ah dadka la xiriira, waa arrin muhiim ah oo ay tahay inaad ogaato doorka Huang mortgage ay.
Deyn ama Loan sarkaal oo waa qofka in qiimeyn doonaa credit, dhaqaale, iyo shaqo macluumaadka si aad u aragto haddii aad xaq u refinance ah. Marka ay dhameeyaan qiimeynta, ay ku siin doonaa fursadaha maal iyo sidoo kale kaa caawin ilaa codsiga amaahda guryaha oo dhameystiran. Waxay ku dhawri doontaa track ee ay xaaladda lagu jiro nidaamka amaah ansixinta.
Processor Loan waa kuwa qofka in diyaarin doonaa in aad amaahda hantida maguuraanka ah macluumaad iyo codsiga loo soo bandhigo si underwriter amaahda. Waxay hubisaa in ka dhigi doonaa in aad ka mid ah waraaqo sharci ah oo dhan, Dhamaan nambarada waxay si sax ah loo xisaabiyaa, iyo wax walba waa si loo hubiyo in go'aan waqtigii aad ansixinta.
Underwriter Mortgage waa kuwa qofka in qiimeyn doonta xaalada aad xaq u leedahay amaahda ku salaysan taariikhda credit aad, taariikhda shaqada, hantida, deymaha, iyo arrimo kale.
Real appraiser estate waa qof in ay u falanqeeyaan doonaa iyo qiimeyn unbiasedly gurigaaga iyo hantidaada si loo ogaado qiimaha hantida dhabta ah. Waxay ku siin doonaa gargaar kuwa leedahay, maareeyaan, iibiso, maalgashadaan oo amaahiya lacag ah oo ku saabsan ammaanka iyo guryaha.
Xidhitaanka wakiilada waa kuwa mid ka mid ah in dusha kala socon doonta iyo isku xirka xiritaanka ama “dejinta” ee amaahda, u qoraan waraaqaha xiritaanka, iyo lacagta u shaqsiyaadka iyo ururada ku haboon.
Dhamaan dadka waxay leeyihiin kaalimo kala duwan oo muhiim ah, laakiin in aad Huang mortgage. Caatada ah oo iyaga ku, su'aalo weydiin, iyo xusuusan ay kuwaas oo ka shaqeeya idiin.
(tixraaca : zillow.com)
2. Kulmiya dokumenti shakhsiyeed refinance mortgage
Marka aad la kulanto aad wax amaahiya in codsato amaahda refinance, waxaad u baahan doontaa inaad keento macluumaadka shakhsiyeed, sida kaliya ee aad u sameeyey, waayo, aad wax iibsiga guriga. Warqadahaasi waxay oggolaan doontaa in aad wax amaahiya si ay u go'aamiyaan in aad xaq u yeelashada, oo ay ku jiraan W-2s aad, statements bangi, iyo canshuur celinta.
Habka u maalgelinta amaahda guryaha aad uula mid tahay habka guriga iibsashada. Waad la abuuro amaah cusub oo la eego cusub ama xataa wax amaahiya cusub (haddii aad isticmaalayso si aad wax amaahiya asalka ama wax amaahiya cusub). Geedi socodka u baahan doonaa dukumenti la mid ah iyo macluumaadka aad bixisay markii aad asal ahaan ka gadanayso guriga.
Qoraalka waxa ka hooseeya socda waa waxa aad leedahay si ay u bixiyaan wax amaahiya:
• W-2s ka sanadkii la soo dhaafay, laga yaabee in laba
• jeegagga Pay ka mid ah la soo dhaafay in ay saddex bilood
• Cadaynta dakhli kasta oo ay dhamaystirayaan
• waraaqaha Tax ka labadii sano ee la soo dhaafay, oo ay ku jiraan bogagga oo dhan iyo jadwalka
• Haddii aad iskaa u shaqeysato, waxay u badan tahay waxa aad helaysaa in ay soo gudbiyaan hadda sano faa'iido-iyo-khasaaro-qoraal, waraaqo kale oo ka mid ah
• statements baaritaanka iyo bangiga kaydka ka mid ah la soo dhaafay in ay saddex bilood
• statements account Investment - oo ay ku jiraan 401(k), Kaydka, IRA iyo lacag is - ka ka mid ah saddex bilood ee la soo dhaafay
• Statements dhamaan deymaha, oo ay ku jiraan baabuur daymaha, Ardayga daymaha, kaararka deynta iyo mortgage hadda
• Koobiga liisanka darawalnimada
Tacliiq : muddada waraaqo kala duwan laga yaabaa in wax amaahiya amaahiya
Haddii aad furay, aad u baahan tahay si ay u siiyaan nuqul ka mid ah wareegtada furniinka oo ay la socdaan looqoro la xiriira ama dukumentiyada taageerada ilmaha.
3. Fahamka Documents ku Lug
Marka aad gadanayso guriga, aad dib u eegay oo saxiixay dokumentiyo badan oo ka hor iyo xiritaankii. Marka aad refinance aad mortgage, Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad sidaas oo kale sameeyaan maadaama ay tani tahay dayn cusub iyadoo heerarka cusub iyo shuruudaha. Markii qaar ka mid ah qaado si ay u eegaan waraaqaha haddana kuwaas oo isqabooji aqoontaada.
Foomamka aad arki doonaa ka hor Soo afjarid
Lebis Residential Loan Codsiga: Tani waa isku mid amaahda hantida maguuraanka ah codsiga aad dhameystirtay marka aad gadanayso guriga, qabsaday warbixin muhiim ah oo adiga kugu saabsan, dhaqaalahaaga, iyo faahfaahinta mortgage kara. Iyada oo foomkan, waxaa looga baahan doonaa inaad keento war ku saabsan dakhligaaga billaha, kharashka reerka marka la isku daro, raasumaalka iyo masuuliyadda, iyo macluumaadka shakhsiga ah sida lambarka amniga bulshada iyo xaaladda guurka. Macluumaadkan waxaa kaa caawin doontaa in wax amaahiya qiimeeyo aad xaq u leedahay amaah cusub.
Good Faith Qiyaasaan: Saddex maalmood oo shaqo codsiga amaah aad buuxisay soo gudbinaya gudahood, aad wax amaahiya waa inuu ku siiyaa a Good Faith Qiyaasaan (GFE) in shuruudaha amaah aad, Escrow macluumaad account, iyo dhammaan kharashyada lagu qiyaasay la xiriira cusub amaahda in ay noqon doontaa sabab xiritaankii.
Xaqa in amaahda Statement Daah-: Saddex maalmood oo shaqo gudahood ka dib markii uu codsi mortgage aad, aad wax amaahiya kuu soo diri doonaa xaqa ah ee amaahda war Daah-. Siidaynta Tan waxaa ku jira lacagta guud ee lagu maalgeliyay, kharash maaliyadda aad, aad Rate Boqolkiiba Annual (dulsaar oo ay ku jiraan, dhibcood, lacag Somailand, iyo kharashyada kale ee), iyo jadwalka bixinta. Dayn ku siin doonaa version cusub ee aad xaqa in laga amaahdo siidaynta xiritaankii.
Dabayaaqadii 2015, deyn bilaabi doonaa iyadoo la isticmaalayo Foomka cusub Loan Qiyaasaan in isku daraa macluumaadka hadda ee GFE iyo runta ku siidaynta amaahda
Noocyada ugu muhiimsan ee aad saxiixday doonaa Soo afjarid
HUD-1 Statement Dejinta: Tani dokumenti muhiim ah ka bixisaa dhammaan lacagta dhabta ah, kharashyada iyo dakhliyada la xiriira oo aad ku gabagabayso heshiis amaah ah. Waxaad xaq u leedahay in lagu siiyo qoraalka dejinta HUD-1 si dib loogu eego 24 saac ka hor xiritaanka. Waxaa muhiim ah in dib loo eego HUD-1 si taxadar leh si loo hubiyo in aad isa soo deyn aad ku heshiiyay in ay. Bogga saddex ka mid ah-HUD 1, miis kuu ogolaanaya in aad si fudud oo dhaqso is barbar qiyaasaha ka GFE in kharashka dhabta ah waxaad ka heli doontaa.
The Note Promissory: Kani waa dukumenti sharci ah in aad saxiixdid heshiis u bixisid amaahda sida ay shuruudaha aad ku heshiiyay. Waxay qeexaysaa faahfaahinta amaahda, taariikhaha marka lacagta waa in la sameeyo iyo meesha lacagta ay tahay in la soo diray. Waxa kale oo uu sharxayaa waxa dhici kara haddii aad ku guuldareysato inay lacag waqtiga.
Camalka ah Trust: By saxeexaya dukumentigan, waa inaad u bixinayso wax amaahiya xaq u leeyihiin inay dib u qaadato hantida by foreclosure aad ka baaqan inaan dib u bixiyo deynta sida ku heshiiyeen. Qoraalkan waxa kale oo uu sharaxayaa xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga sida deyn ah.
Camalka ah Trust: Iibiyaha ayaa saxiixi doona wixii si ay u gudbiyaan lahaanshaha idiin, oo waxay yeelan doontaa dhamaan magacyada iibsada ee ku yaal. Your horyaalka waxaa lagu qaban doonaa iyadoo wakiilka dhinac saddexaad ilaa aad bixisay ee guriga oo buuxa. Waxaad heli doontaa nuqul ka mid ah wixii ay xiritaankii.
Affidavits iyo Bayaanka: Kuwani waa weedhaha odhanaya dhammaan macluumaadka aad u bixiyo waa run, ay ka mid yihiin in hanti uu noqon doono hoose deganaansho iyo dayactirka loo baahan yahay hantida waxaa lagu sameeyey ka hor xiritaanka.
4. Go'aaminta kharashka
Maalgelin aad mortgage waxaad badbaadin kartaa boqolaal doolar bishiiba, laakiin ka hor inta aanad quusin in, waxaa muhiim ah in aad ka war hayso oo dhan kharashyada la xiriira. Waxaad u baahan in ay si dhow ula shaqeeyaan si aad wax amaahiya samayn gorfayn qiimaha-waxtarka iyo go'aamiyo haddii Huang wuxuu macno dhaqaale aad u.
Waxyaabaha aad ogaanaysid Waa Ka hor Refinance mortgage waa
Shuruudaha soo socda ee raadinta:
Waxba ma ay helin.
Voice-badan oo ay TTSEngine.com
Waxaad u leeyihiin in ay ka hor Mortgage Refinance | refinance mortgage, refinance mortgage, Refinance, Maalgelin
Tagged on: refinance mortgage refinance refinance mortgage maalgelinta
← 3 Talaabooyinka aad samaynayso haddii aad rabto in aad bixinta amaahda guriga In 7 Sano ama ka yar (1) | mortgage, refinance mortgage, bixiso daynta, deynta oo lacag la'aan ah, tirtiridda mortgage
Gadashada guri ah oo lacag caddaan ah ama amaahda | mortgage, amaahda →
Lahaanshaha guri waa dhagaxa rukunka ah oo xoolo – labada barwaaqo dhaqaale iyo ammaanka dareenka.
Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato About Heerarka Mortgage
Waxayaabaha ah inaad ogaato ka hor inta pre-u qalanto amaahda
Gadashada guri ah oo lacag caddaan ah ama amaahda
3 Talaabooyinka aad samaynayso haddii aad rabto in aad bixinta amaahda guriga In 7 Sano ama ka yar (1)
Xisaabi Lacagta Mortgage
Deyn bixin Period
Muddada Payment BishiibaBi-WeeklyWeekly
codsato amaahda deynta oo lacag la'aan ah amaah guriga refinance guriga amaah daymaha mortgage ansixinta mortgage tirtiridda mortgage amaahda hantida maguuraanka ah daymaha mortgage refinance mortgage amaahda bixiso daynta refinance refinance mortgage maalgelinta
copyright © 2018 Mortgage Loan iyo Mortgage Refinance. Waxaa suuro galiyay WordPress. theme: Jashiisu by ThemeGrill.
Waxa kale oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaadhow
8 wax in la ogaado ka hor intaadan dalban amaahda hantida maguuraanka ah